प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको पत्रः बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्नू. – Sabaikoaawaj.com
प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको पत्रः बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्नू.
बिहिबार, चैत्र ३१, २०७३ 10:20:28 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं ,३१ चैत/ सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गरेर जन्मकैदको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र पठाएको छ ।
सर्वोच्चले लगतै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाममा पत्र काटेर ढुंगेललाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले प्रधानमन्त्रीको नाममा सर्वोच्चले पत्र पठाएको बताए ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र ३१, २०७३ 10:20:28 PM